Ndozi Gel Cap
Ndị mmadụ kwesịrị ekwesị: Ndị na-anụ egwuregwu n'èzí Ma ọ bụ Nnukwu ụkwụ ma ọ bụ Ndị merụrụ ahụ
Ojiji: Ndụ kwa ụbọchị + Egwuregwu + mgbatị
:Dị: Mkpakọ Egwuregwu Mkpịsị ụkwụ Aka
Asambodo: CE FDA MSDS BSCI REACH ISO9001
Ọrụ: OEM ODM Ọrụ
Reusable hemorrhoid perineal ịmụ nwa ice ọgwụgwọ mgbu enyemaka ọkụ na oyi na-atụ gel ice mkpọ nwere aka dị nro
Mmezi ọgwụgwọ ọnọde
Brand aha: HY, ma ọ bụ OEM gị ika
Nha: 30 * 10
Agba: nwere ike omenala, Popular acha anụnụ anụnụ na agha mmiri na ngwaahịa
Njirimara: Plush azụ cover ákwà
N'olu ubu ice mkpọ kechie
Akwụkwọ: SGS MSDS FDA CE REACH
Nha: 35 * 16cm
Agba: ngwaahia Agba: odo odo, green, red
Tụkwasịnụ Ikike: 200000 Ibe / iberibe ọnwa
Ogologo dị iche iche maka ịhọrọ gị.
Reusable Ice mkpọ na kemeghi eriri
Dị ka usoro ahụike na nchekwa nke eji na ọgwụgwọ anụ ahụ, ndị na-agwọ ọrịa, ndị dọkịta, ndị na-azụ egwuregwu na-atụkarị aro ndị na-ekpo ọkụ gel. Ngwunye ngwungwu a na-ekpo ọkụ dị mfe, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ aka gị, eriri ahụ dị mkpa, ụlọ ọrụ anyị nwere ndị ọrụ ịkwa akwa ma dọọ eriri ahụ ozugbo na ngwugwu ice ma ọ bụ mee onye ọ bụla na ngwugwu ahụ, dị mfe maka ikpeazụ ojiji.
Microwavable ice mkpọ nwere eriri velcro ogologo na-enye gị ohere ịchekwa mkpọ ice ahụ na mpaghara dị mkpa ma nọrọ ebe, dị nro iji metụ aka ma ka nọ ebe ọbụla na-agagharị ma ọ bụ na-aga n'ihu na ọrụ ụlọ. Fectdị zuru oke na-enye ohere mkpuchi dị ukwuu na ala ala niile ma na-eme ahụ nke ọma, usoro ọgwụgwọ dị ukwuu maka mgbu na-egbu mgbu, mmerụ ahụ, ihe mgbu mgbe a wachara ya ahụ, ọzịza, akwara mgbu. Ọ na-edo Soft na mgbanwe mgbe oyi kpọnwụrụ.
Njirimara: Nweta ọgwụgwọ ọgwụgwọ
:Dị: Ngwunye ọkụ na oyi
Ihe: NYLON + ajị anụ
Asambodo: CE FDA BSCE MSDS ISO9001 REACH
Ojiji: Nlekọta Homelọ na-ekpo ọkụ / oyi
Reusable oyi ọgwụ gel slippers, ngwangwa enyemaka ice ọgwụgwọ maka ike gwụrụ na fụrụ akpụ ụkwụ, ụkwụ na-ekpo ọkụ, enyemaka si neuropathy mgbu kpatara ọrịa shuga na iji ọgwụ.
Emepụtara ya na akwa na-adịchaghị mma, slippers anyị oyi atụ bụ ndị dị mfe iji ma jụọ oyi dị n'ime ala dum na elu nke slippers ahụ maka izu ụkwụ na-aga n'ihu.
factory na-enyocha site BSCI, anyị na ngwaahịa na-asambodo site SGS, OA, FDA.